merolagani - फाइभजी परीक्षण अनुमतिको लागि टेलिकमले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मापदण्ड तयार, के छ कार्यविधिमा ?
फाइभजी परीक्षण अनुमतिको लागि टेलिकमले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मापदण्ड तयार, के छ कार्यविधिमा ?
Jul 27, 2021 01:43 PM merolagani
नेपालमा फाइभजी परीक्षण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड तयार पारेको छ । सोमबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले नेपाल टेलिकम मार्फत हुने फाइबजी परीक्षणको लागि नियामनकारीलाई बुझाउनुपर्ने सबै प्रक्रिया र कागजपत्रबारे निर्णय गरेको हो ।
नियामकले फाइभजीको लागि सबै प्रक्रिया स्पष्ट पारेसँगै नेपाल टेलिकमलाई पाचौं पुस्ताको प्रविधि भित्र्याउन र सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणले तयार पारेको उक्त ‘फाइभजी संचालनको लागि कार्यविधि’ ले परिक्षणको लागि निवेदन गर्नुपर्ने बिषय,नेटवर्क निर्माण,परीक्षण अवधि, शेवा शुल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, उपकरणको व्यवस्थापन तथा विवरण लगाएतको प्रक्रिया तोकेको छ ।
हाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले फाइभजी सेवाको लागि आवश्यक पर्ने कागजात तथा प्रकृयालाई स्पष्ट पारेको र सोही अनुसार परिक्षण अनुमतिको प्रक्रियापनि अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक स्थापितका अनुसार कार्यविधिमा उल्लेख भएका सबै प्रक्रिया पुरा भएलगतै टेलिकमले फाइबजी परिक्षणको लागी अनुमति पाउने छ ।
‘हामीले टेलिकमलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया र मापदण्डबारे जानकारी गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेका छौं सोहि कार्यक्षेत्रमा रहेर टेलिकमले काम अघि बढाउने छ’ ।
टेलिकमले यस अघि नै फाइभजी परीक्षणको लागि अनुमति मागि सकेको र ७०० वा ८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड तथा २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फाइभजी परीक्षण गर्न खोजेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यविधि अनुरुप नै प्रक्रिया अघि बढेको खण्डमा तोकिएको समय भन्दा पहिले नेपालका विभिन्न स्थानमा फाइबजी परिक्षण गर्न सकिने प्राधिरकणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सन २०२२ भित्रै नेपालका फाइभजी परिक्षण र २०२५ सम्म देशभर फाइबजी सेवा जनतालाई उपलब्ध गराइसक्ने बताइएको छ ।
टेलिकमले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मापदण्ड हेर्नका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।